Mpaninjara ny rano → HoReCa • Hotely • trano fisakafoanana • Catering Warsaw
Mila dispenser rano amin'ny hotely iray, trano fisakafoanana ve ianao? Ny orinasa Water Point dia manolotra ireo mpamaky rano anaty tavoahangy, mpisotro, loharanon'ny mpitondra an'izao tontolo izao, izay mpizara manokana antsika any Polonina.
Tsara kalitao rano zava-dehibe amin'ny fiainana ary tokony ho azo foana, na ao an-trano na any am-piasana.
Ao amin'ny toerana toa azy ihany koa trano fisakafoanana, kafe, hidy i trano fandraisam-bahiny zava-dehibe ny hananan'ny vahiny foana ny fidirana amin'ny rano matsiro sy mahasalama.
Ny rano natolotra dia tsy maintsy mahafeno ny fanantenan'ny mpanjifa, matetika kokoa ny orinasa HoReCa ao Polonina, mampiasa vahaolana eran'izao tontolo izao izy ireo, mameno ny toerany miaraka amin'ireo mpamatsy rano madio sy salama maoderina, loharanom-pisotro ary mpimamo mpiasam-bahoaka.
Ny fampiasana ireo teknolojia famokarana vaovao dia mamela ny famoronana vokatra avoakan'ny rano avo lenta izay mifanaraka amin'ny andrasana na dia ny mpanjifa tena mitaky aza.
Ireo dispenser natolotra dia manome alalana ny fampiasana rano tsara indrindra amin'ny hotely, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana ary trano fisakafoanana, i.e. na aiza na aiza ilaina amin'ny fikarakarana ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny vahiny mitsidika ireo toerana ireo.
Mpamatsy rano ao amin'ny hotely, trano fisakafoanana na kafe dia tokony haseho amin'ny alàlan'ny fahombiazan'ny fanaparitahana rano sy ny teknolojia mangatsiaka ampiasaina.
Fitaovana fizarana rano fisotro natokana ho an'ny sehatry ny HoReCa dia tsy maintsy amboarina amin'ny fomba hahazoana antoka ny fahadiovana tanteraka.
Ny dispenser toy izany dia mety ho feno fitaovana fametrahana rano ihany koa na cylinder CO2.
Ny fitsinjarana rano ho an'ny trano fisakafoanana na trano fandraisam-bahiny dia miantoka ny kalitaon'ny rano fisotro avoakan'ny vahiny.
Ny loharano mavesatra sy ny fisotroana rano maoderina dia mora ampiasaina sy tena mahomby, ary tena malaza eo an-tsena, manome antoka ny lazan'ny toeram-pisakafoanana, kafe na hotely iray ary ny haavon'ny serivisy ambony indrindra ho an'ny vahiny. Ny tombony fanampiny dia ny famolavolana maoderina amin'ny fitaovana, izay mahatonga ny mpisotro hoso-doko amin'ny toerana rehetra.
Ny dispenser rano fisotro dia manome antoka ny fidirana amin'ny kalitao avo indrindra ho an'ny rehetra, amin'ny fotoana rehetra.
Ny fenitry ny hotely iray, ny trano fisakafoanana na ny pub dia misy fiantraikany, ankoatry ny zavatra hafa, amin'ny kalitaon'ny rano fisotro misy azy ireo. Raha voaomana tsara sy omena azy, ohatra amin'ny kozatra misy voasarimakirana sy ny solila, ka milay be izany ary toa manintona amin'ny fotoana mitovy, ho fanatsarana ny sarin'ilay toerana izany.
Matsiro sy vaovao, tsy misy tsindrona, klôro sy mikraoba, ny rano dia mety avy amin'ny dispensers rano fisotro maoderina. Ity rano voasiana sy nodiovina ity dia azo atolotra ao anaty tavoahangy na carafes, na azonao atao ny manondraka avy aminy.
Mihamaro hatrany ny olona mampiasa fitaovana fanadiovana rano maoderina ao an-tranony, ary manantena ihany koa fa rehefa mampiasa ny serivisy hotely na trano fisakafoanana dia mampiasa rano mahasalama sy madio ihany koa izy ireo.
Ny serivisy rano avy amin'ny dispenser dia hisy fiantraikany tsara amin'ny sarin'ny toerana, izay mikarakara ny fahasalaman'ireo vahiny sy ny tontolo iainana, satria noho ity fitaovana ity dia mihena be ny fako vokarina.
Ny rano nomanina amin'ity fomba ity dia mety ho fitsaboana lehibe ho an'ny olona mangetaheta rehetra, izay no hanapa-kevitra an-tsitrapo hampiasa ireo serivisy fisakafoanana.
5 / 5 ( 24 vato )
milina fivarotana ranorano maimaimpoana ao amin'ny hotelyrano maimaimpoana ao amin'ny trano fisakafoananarano mafana ao amin'ny hotelyrano maimaimpoana ao amin'ny hotelywater dispenserwater dispenserwater dispenserdispenser rano ho an'ny trano fandraisam-bahinydispenser rano ho an'ny trano fisakafoananadispenser rano misy karbonikahc66l water dispenservidin'ny fanofa-bidy amin'ny ranotapitra dispenser ranony fandefasana ranofikorianan'ny ranovata fampangatsiahana miaraka amin'ny dispenser ranomasinina milina ranofitaovana ho an'ny rano gassingfitaovana ho an'ny rano karbonatanaNy rano ao amin'ny trano fisakafoananarano ho an'ny gastronomyrano ho an'ny trano fisakafoananarano mamelatra avy amin'ny paompyrano mineraly ao amin'ny hotelyrano ao anaty trano fisotroanarano amin'ny gastronomyrano ao amin'ny trano fandraisam-bahinyrano ao anaty kaferano ao amin'ny trano fisakafoananapaompy rano amin'ny hotelyrano fisotro any amin'ny trano fisakafoananarano lohataonarano mangatsiaka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny